बिहे गर्ने उमेर नहुँदै सन्तानको रहर पूरा |
बिहे गर्ने उमेर नहुँदै सन्तानको रहर पूरा
प्रकाशित मिति :2017-07-05 17:06:54
स्थायी बन्ध्याकरणका लागि आफ्नो दर्ता गराउँदै महिलाहरु
बैतडी । डिलाशैनी गाउँपालिका रुद्रेश्वरकी वसन्ती बोहराले २० बर्षकै उमेरमा गत फागुनमा स्थायी बन्ध्याकरण(मिनिल्याप) गरिन् । १५ बर्षकै उमेरमा विवाह गरेकी उनको २ सन्तान भैसकेको छ । त्यसैले सन्तानको रहर पूरा भएकाले बन्ध्याकरण गरेको उनले बताइन् ।
वसन्तीले १६ बर्षमा पहिलो छोरा र १८ बर्षमा दोश्रो छोरा जन्मएकी थिइन् । ‘सानैमा विवाह भयो, सन्तानको रहर पनि पूरा भयो, त्यसैले स्थायी बन्ध्याकरण गरेकी हुँ ।’ बसन्तीले भनिन् ।
कक्षा ७ मा पढ्दै उनको आमाबुवाले मागी विवाह गरिदिएका थिए । पढ्ने रहर भएपनि विवाहपछि उनको पढाई अधुरै भयो । ‘पढेर ठूलो मान्छे बनुला भन्ने सोच थियो तर गाउँघरमा यस्तै चलन छ । छोरी अलि ठूलो हुने बित्तिकै ज्वाईको खोजी गर्छन् ।’ उनले भनिन् । उनका श्रीमान बेरोजगार छन् ।
२० बर्षमुनिको विवाहलाई गैरकानुनी मानिएपनि बैतडीका ग्रामिण क्षेत्रमा अधिकांशको २० बर्षअघि नै विवाह भएर बालबच्चा भैसकेका हुन्छन् । सानैमा विवाह गर्दा उनीहरुले बाल्यावस्थामै सन्तानको रहर पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन गरिने परिवार नियोजन शिविरमा २० बर्षमै मिनिल्याप गर्ने महिलाहरु धेरै आउने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्र्यालय बैतडीका प्रमुख डा.गुणराज अवस्थीले बताए ।
वसन्ती त एक उदाहरण मात्रै हुन् । डा. आस्तीका अनुसार स्थायी बन्ध्याकरणका लागि अधिकांश २० बर्षमै सन्तानको रहर पुगेका आमाहरु आउछन् । यसले बैतडीमा अत्याधिक बालविवाह हुने गरेको र सबैभन्दा बढी समस्या महिलाले भोग्नु परिरहेको समेत उनले बताए ।
विभिन्न सांस्कृतिक तथा धार्मिक आस्थाका कारण सानैमा विवाह गर्दा समग्र महिलाको जीवन अन्धकारमय भएको उनको बुझाई छ । ‘सानैमा विवाह गर्दा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक सवै पक्षबाट नोक्सान छ, डा. अवस्थीले भने । प्रजनन अंगहरु विकसित नहुँदै सानैमा विवाह गरि बच्चा जन्माएका आमाहरुमा पाठेघर खस्ने र अन्य स्वास्थ्य समस्या धेरै रहेको पनि उनले बताए ।
सानै उमेरमा विवाह गरि चुलोचौकामा सीमित रहेका महिलाहरुमाथि घरेलु हिंसा बढी हुने गरेको महिला विकास अधिकृत अनिता बुढाऐरले बताए । पाटन नगरपालिकाका उपमेयर सरस्वती कोलीले वैतडीमा बालविवाहको समस्या विकरल रहेकाले रोकथामका लागि सक्दो पहल गर्ने बताए ।